Salt – Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆားဘယ်လောက်ပမာဏ စားသင့်ပါသလဲ . .
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆားပမာဏများများစားရင် သွေးတိုးပြီး ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်တဲ့ဝေဒနာ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆားကို တစ်နေ့ဘယ်လောက် စားသင့်ပါသလဲရှင်။ TTP (FB) A. ကိုယ်ဝန်စဆောင်တာနဲ့ Healthy...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လည်ချောင်းနာတာ၊ သွားကိုက်တာ၊ ခြင်ကိုက်တာ၊ သွားဖုံးနာတာနဲ့ မီးပူလောင်တာ စတဲ့ ဝေဒနာတွေအတွက် ဆားကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အနာကျက်စေနိုင်တဲ့ ဆားကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာခြင်း လည်ချောင်းနာတာအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးအနေနဲ့ ကြက်သီးနွေးရေထဲကို ဆားခတ်ပြီး...
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဘယ်အကြောင်းရင်းတွေက သွေးတိုးစေတာလဲ . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အငန်စားရင် သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်အရ လူတစ်ယောက်က ဆား (Salt or Sodium) တစ်နေ့ခြောက်ဂရမ် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း) ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုတေသနတွေအရ ပျမ်းမျှအားဖြင့်...
လျှာအဆီများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်သည့်ရောဂါကို သက်သာစေနိုင်
ကိုထက် လေ့လာမှုအသစ်များအရ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီများသူတွေနဲ့ အဝလွန်သူတွေရဲ့လျှာဟာ ခန္ဓာကိုယ်တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေလို အဆီတွေစုလာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ လူပေါင်း သန်း၂၀ လောက်ဟာ အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်ရပ်သွားတတ်တဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကို အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိကြပြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ...
အငန်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့် ကြာလာလျှင် ထိခိုက်နိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ
Q. အငန်အလွန်အကျွံစားတာကြောင့် ရေရှည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. မြန်မာလူမျိုးတွေက အငန်အရသာကို ကြိုက်တာများပါတယ်။ အငန်ကို အသင့်အတင့် စားတာကတော့ ရပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မုန့်ဟင်းခါးစားတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ ငံပြာရည်ထပ်ထည့်ပြီး စားတတ်ကြတယ်။...
အိမ်သုံးဆားကို ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ စားသုံးနည်း
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဆားဘယ်လောက် ပမာဏစားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ဆား ၂ ဒသမ ၄ ဂရမ်ပဲ စားသင့်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)က ဆိုထားပါတယ်။ ဒီပမာဏက...
နေ့စဉ် သတိပြုပါ၊ ဆားများသော အစားအစာ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အစားအစာတွေ တာရှည်ခံအောင်နဲ့ အရသာရှိအောင်ဆိုပြီး ဆားတွေကို ထည့်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆားများလွန်းရင်တော့ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် ဆားကဲတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်သင့်တာရှောင်ပြီး လျှော့သင့်တာကို လျှော့စားပေးရပါမယ်။ – အဆင်သင့် ခေါက်ဆွဲခြောက် အီတလီခေါက်ဆွဲကိုစားတာက...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ဆားဘယ် လောက်ပမာဏ စားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ဆား ၂ ဒသမ ၄ ဂရမ်ပဲစားသင့်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဆိုထားပါတယ်။...
ကလေးဆန်ပြုတ်ထဲ ဆားထည့်သင့် ၊ မသင့် . . .
မေး ။ တစ်နှစ်အောက်ကလေးစားတဲ့ ဆန်ပြုတ်ထဲ ဆားထည့်သင့် ၊ မထည့်သင့်ပြောပေးပါဦး ဆရာ။ Phoe Pyae May May (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ လူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ်...